फुटवेयरमा छुटको बिग अफर - बजार - साप्ताहिक
फुटवेयरमा छुटको बिग अफर
बुधबार बिहान भृकुटीमण्डपमा जारी विगसेल फुटवेयर मेलामा रातोपुलका विनीत शर्मालाई जुत्ता–चप्पल छान्न भ्याइनभ्याइ थियो । पुस १४ गतेदेखि माघ ९ गते सम्म संचालित मेलामा उनले आफ्ना लागि दुई जोर जुत्ता मात्र छानेनन्, श्रीमतीका लागि एक जोर स्यान्डल र छोराका लागि एक जोर स्पोर्ट्स सुज पनि किने ।
सस्तादेखि महँगा जुत्ता एउटै छानामुनि त्यो पनि अकर्षक छुटमा पाइने भएपछि शर्मा मात्र होइन, दैनिक ५ हजारसम्म मानिस जुत्ता–चप्पल किन्न भृकुटीमण्डप पुग्ने गरेका छन् । यो मेलामा नेपालका नाम चलेका १० वटा ब्रान्डले १५ प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म छुटमा आफ्ना उत्पादन उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । बिग सेल भए पनि मेलामा चलनचल्तीका मोडल पनि खरिद गर्ने अवसर उपलब्ध गराईएको थियो ।
यो मेला उपभोक्ता एवं व्यवसायीको सीधा सम्पर्कका साथै व्यवसायीले आउटडेटेड हुन लागेका ब्रान्डलाई बजारमा सस्तोमा पठाउने मौका पनि हो । यस्ता सामग्री क्वालिटीका हिसाबले उत्तम भए पनि फेसनका हिसाबले केही पुराना हुन्छन् । त्यही भएर पनि व्यवसायीहरूमाथि समयमै ती सामग्रीको स्टक क्लियर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ— बिएफडियर हिल सुजका सञ्चालक होमनाथ उपाध्याय बताउँछन् ।
कुन–कुन ब्रान्डका जुत्ता नेपाली जुत्ताघरले सञ्चालन गरेको यो बिगसेलमा देशका चर्चित १० वटा ब्रान्डका फुटवेयर उपलब्ध हुन्छन्, जसमा शिखर सु, बीएफ सु, स्काई सु, क्रसरोड सु, कोसेली, सु ल्यान्ड, फुट ल्यान्ड, टाकुरा तथा इजी छन् ।
डेढ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्मका जुत्ता–चप्पल यस पटकको सेलमा उपलब्ध छन् । फरक–फरक ब्रान्डका सबै खालका जुत्ता–चप्पल मेलामा खरिद गर्न सकिने नेपाली जुत्ता घरका अध्यक्ष रामकृष्ण प्रसाईं बताउँछन् । यस वर्षको विशेष अकर्षण भनेको लेडिज फुटवेयर हो, जुन विगतका वर्षहरूमा थिएन । यो मेलाको अर्को मुख्य उद्देश्य नेपाली उत्पादनलाई प्रत्येक नेपालीसँग जोड्नु तथा नेपालमै नयाँ–नयाँ ब्रान्डका गुणस्तरीय जुत्ता उत्पादन हुन्छन् र ती जुत्ता विदेशीभन्दा कम छैनन् भन्ने देखाउनु पनि हो । व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले एकपटक नेपाली जुत्ता लगाए उनीहरू पुन: विदेशी ब्रान्डका जुत्ता लगाउँदैनन् । सस्तो, बलियो तथा लगाउँदा मुलायम हुनु नै नेपाली जुत्ता गुणस्तरीय भएको प्रमाण हो ।
मेलामा नयाँ डिजाइनका भर्खरै बनेका जुत्ता–चप्पलमा कम छुट दिइएको छ । तिनीहरूमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मात्र छुट छ । पुरानो डिजाइन तथा बाहिर देखिने गरी त्रुटि नभएका जुत्ता–चप्पलमा बढी छुट प्रदान गरिन्छ भने बढी मूल्यका जुत्ता–चप्पलमा थोरै छुट दिइएको छ । त्यसैगरी कतिपय ब्रान्डले एक जोर किन्दा ३ सय देखि ५ सयसम्म छुट दिएका छन् । त्यही ब्रान्डको दुई जोर किन्दा ५ सयभन्दा माथि छुट उपलब्ध हुन्छ । त्यसैगरी कतिपय कम्पनीले महँगा जुत्ता–चप्पलमा दुई जोर किन्दा १ हजारसम्म छुट दिएका छन् ।
धेरै ठूलो अफर दिए पनि ग्राहकलाई पुराना र कामै नलाग्ने जुत्ता–चप्पल नभिडाइने कोसेली जुत्ताका सञ्चालक रविन श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रत्येक वर्ष यस्तो मेला लाग्ने हुँदा १ वर्षभन्दा पुराना जुत्ता–चप्पल स्टकमा नहुने उनको दाबी छ । त्यसैगरी बिएफडियर हिल सुजका संचालक होमनाथ उपाध्याय पनि यो मेलामा ठूलो परिणाममा जुत्ता–चप्पल बिक्री हुने हुँदा ठूलो छुट दिन सकिएको बताउँछन् ।
मेलामा नयाँ ब्रान्ड पनि छन्
रामकृष्ण प्रसाईं, अध्यक्ष नेपाली जुत्ताघर
मेलामा ग्राहकबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
एकै दिन ७ हजारसम्मले यो मेला अवलोकन गरेका छन् । दैनिक कम्तीमा पनि २५ सय जोर जुत्ता–चप्पल बिक्री भैरहेका छन् । यी सबै तथ्य हेर्दा ग्राहकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको मान्नुपर्छ । यसले गर्दा हाम्रो लक्ष्य पनि पूरा भएको छ ।
मेलालाई पुराना जुत्ता तह लगाउने मेसो भनिन्छ नि ?
खासमा भन्ने हो भने जुत्ता–चप्पलमा ५/६ वटा साइज हुन्छन्, तीनवटा कलर हुन्छन् एक–दुई वर्षमा ती सबै मोडल आउट अफ फेसन हुन्छन् । गत वर्षदेखि हामीले यही मेलामा नयाँ ब्रान्डका जुत्ता पनि लन्च गर्न थालेका छौ । सामान्यत: स्टकमा जुन जुत्ता बढी हुन्छ त्यसलाई कटाउनुपर्ने हुन्छ । यो मेला भनेको त्यही नै हो । एकै ठाउँमा ४० देखि ५० वटा स्टल राखेर दैनिक ८/१० हजार मान्छे आएर बजारमा ४ हजार ५ सय रुपैया पर्ने जुत्ता १ हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद गर्न पाउँदा किन्नेलाई पनि फाइदा भयो र बेच्नेलाई पनि ।
मेलामा जस्ता पनि जुत्ता–चप्पल हुन सक्छन्, कसरी राम्रो छान्ने ?
हिजोआजका ग्राहक धेरै कन्सियस छन् । उनीहरूलाई कसले बढी मूल्य लिएको छ, कसले कम मूल्य लिएको छ, कुन गुणस्तरीय सामान हो, कुन कमसल हो सबै थाहा हुन्छ । अर्को कुरा, हामी सबै चलनचल्तीका ब्रान्ड हौं । यसमा नराम्रो भयो भने हाम्रो उपभोक्ता त तिनै हुन्, उनिहरूले लगाउन छोडेभने हाम्रो व्यवसाय नै चौपट हुन्छ । यसकारण पनि हामी सेल भन्दैमा कमसल सामान ग्राहकलाई भिडाउँदैनौ । त्यसकारण गुणस्तरमा संका मान्नुपर्ने अवस्था छँदै छैन ।
प्रकाशित :माघ १०, २०७३
अमेरिकन बियरमा बियर फ्रि
बिग बोसमा रानी
फेसन ट्रेड सम्पन्न
व्यस्त हुँदै अभिषेक
सबैभन्दा महँगो मिठाई कार्तिक २०, २०७५
केही महँगा चकलेट कार्तिक १९, २०७५
इलेक्ट्रिक कारको सम्भावना आश्विन ४, २०७५
विलासी सवारीको सौख आश्विन ३, २०७५
नेपाली बजारमा महँगा गाडी आश्विन २, २०७५
महँगा मोटरसाइकल आश्विन २, २०७५
विवाहको बजार जोगवनी फाल्गुन २३, २०७४
सय रुपैयाँमा जुत्ता–चप्पल कार्तिक १६, २०७४
फेमस ड्रिङ्क्स एण्ड जक्सन कार्तिक ७, २०७४
फेमस ड्रिङ्क्स एण्ड जक्सन कार्तिक ६, २०७४